I-CEO ye-Binance ixabisa i-96 yezigidigidi zeedola, ngoku iSityebi se-Crypto Billionaire: iBloomberg
Ukuhlaziywa: 10 January 2022
I-Bloomberg ibize i-CEO ye-Binance u-Changpeng Zhao njengoyena mntu ucebileyo we-crypto bhiliyoni, ebeka ixabiso lakhe le-96 yeebhiliyoni zeedola. UZhao, CZ, ngoku uxabisa ngaphezulu kwe-tycoon yeshishini laseIndiya u-Mukesh Ambani, othi, ngokutsho kweBloomberg Billionaire Index, unexabiso le-92.9 yeebhiliyoni zeedola.
Uqikelelo lwamva nje lubeka iCZ kufutshane neejuggernauts ezifana noWarren Buffet kunye noMark Zuckerberg. Oko kwathiwa, abaninzi baye baphikisa ukuba ixabiso le-CZ linokuba ngaphezu kweBloomberg iphakamisa ukuba kuncinci okwaziwayo malunga nokubamba kwakhe i-crypto.
I-CEO yeBinance, owayesebenza njengomncedisi kaMcDonald xa wayekwishumi elivisayo, uye wakuphepha ukwenza ubungakanani obuchanekileyo bobutyebi bakhe baziwe kwaye uthe uya kunikela ngobutyebi bakhe bonke.
Ngeli xesha, iWall Street Journal isandula kubanga ukuba uBinance unokufumana ixabiso eliya kuthi ga kwi-300 yeebhiliyoni zeedola ukuba lihambe esidlangalaleni. Utshintshiselwano lwe-behemoth lurekhode ingeniso yonyaka ye-20 yeebhiliyoni zeedola ngo-2021, lugqithisa ulindelo lwembangi yalo esekwe e-US uCoinbase.
Nangona kunjalo, uBinance uye wabuza ukuchaneka kokulinganisa kweBloomberg, ephawula ukuba i-crypto iguquguqukayo kakhulu ukwenza uqikelelo lwekhonkrithi. Kwakhona, utshintshiselwano lwalwa nokubulawa kwemibuzo elawulayo kunyaka ophelileyo.
Ukuqhubela phambili, i-CEO ye-FTX u-Sam Bankman-Fried kunye no-CEO we-Coinbase u-Brian Armstrong beza kwindawo yesibini neyesithathu ngokusekelwe kwiibhiliyoni ze-crypto ezicebileyo, kunye ne-15.4 yeebhiliyoni zeedola kunye ne-8.93 yeebhiliyoni zeedola, ngokulandelanayo.
Amanqanaba angundoqo eNkozo yeBinance ekufuneka ibukele —ngoJanuwari 10
I-Binance Coin (BNB) iphinde yaqala phantsi ngoMvulo, njengoko kuye kwacaca ukuba iibhere ngoku zilawula utyekelo lwentengiso. I-BNB ngoku irhweba kunye ne-trendline yam yokuhla yeenyanga ezininzi ukuya kwi-410 yeedola - i-$ 400 yendawo yenkxaso.
I-BNBUSD-Itshathi yemihla ngemihla kwi-BinanceUS. Umthombo: TradingView
Oko kuthethiweyo, ndilindele ukubona ukuqhubeka kwe-bearish kwiintsuku ezizayo kunye ne-trendline njengoko siqhubeka nokubona ukuwohloka komjikelo wenkunzi.
Okwangoku, amanqanaba am okumelana nama-436, i-$ 450, kunye ne-$ 460, kwaye amanqanaba am enkxaso yi-$ 410, i-$ 380, kunye ne-$ 350.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.91 zezigidi
Imali yokutshintsha imali kwiBhinance: $ 70.8 billion
Imali yokutshintsha Binance? 3.7%
tags Binance, IChinance Coin, BNB, Cryptocurrency, iindaba, Uhlalutyo lobuGcisa
I-BINANCE (i-BNBUSD) Ixabiso: Ngaba kuya kubakho ukuNcitshiswa kweXabiso elongezelelweyo ngaphantsi kwe-$ 503?
Uhlalutyo lwamaxabiso e-BNBUSD-Disemba 31
Ixabiso linganciphisa ngakumbi kwi-$ 430 kunye ne-$ 364 amanqanaba okuxhasa anikezela ngenqanaba lenkxaso kwi-$ 503 ayibambeli. Kwimeko apho inqanaba elikhankanywe libambe, ixabiso le-BNB linokwenyuka ukuya kumanqanaba okumelana ne-540 yeedola, i-599 yeedola kunye ne-678 yeedola.
Amanqanaba okubonelela: $ 540, $ 599, $ 678
Amanqanaba emfuno: $ 503, $ 430, $ 364
Kwitshathi yemihla ngemihla, i-BNBUSD i-bearish. I-crypto ihlala iphantsi kolawulo lwabathengisi. Emva kokuwa okukhulu okufunyenwe yi-Binance Coin kunye nokuqulunqwa kwephethini yetshathi ephindwe kabini, ixabiso liye lahla. Inqanaba lenkxaso ye-503 yeedola yavavanywa kwaye yatsalwa umva ukuze kuphinde kuhlolwe izinga lokumelana ne-$599. Iibhere zichasa ukunyuka kwexabiso kwaye ngoku iphinda iphinda ixhase inqanaba le-503 yeedola.
Itshati yemihla ngemihla ye-BNBUSD, nge-31 kaDisemba
I-crypto iyancipha njengoko amakhandlela amaninzi e-bearish avela ngaphantsi kwe-540 yezinga. Ixabiso lirhweba ngaphantsi kwe-9 ixesha lokuhamba kwe-Average kunye ne-21 i-avareji ehambayo kumgama ukubonisa ukuhamba kwe-bearish. Ixabiso linganciphisa ngakumbi kwi-$ 430 kunye ne-$ 364 amanqanaba okuxhasa anikezela ngenqanaba lenkxaso kwi-$ 503 ayibambeli. Kwimeko esele ikhankanyiwe inqanaba, ixabiso le-BNB linokwenyuka ukuya kumanqanaba okumelana ne-540 yeedola, i-599 yeedola kunye ne-678 yeedola.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-BNBUSD ikwi-bearish. Kwiveki ephelileyo iinkunzi zeenkomo zazizama ukutyhala intengo ukuya kwinqanaba lokumelana ne-599 yeedola. Ngomhla wama-27 kaDisemba, iibhere ziphazamisa ukunyuka kwamaxabiso kwaye itshintshe indlela eya emazantsi. I-bearish momentum iyancipha ixabiso kwinqanaba lenkxaso ye-503 yeedola. Ixabiso lizama ukudiliza inqanaba lenkxaso ye-503 yeedola.
BNBUSD iiyure ezi-4, ngoDisemba31
Ixabiso liwele i-EMA ezimbini ezantsi kwaye ixabiso lirhweba ngaphantsi kwamaxesha angama-9 e-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA. I-Relative Strength Index ixesha le-14 lingaphantsi kwenqanaba le-40 kunye nomgca wesignali okhomba phezulu obonisa ukuba ixabiso linokuthi lihlehlise kwinqanaba lenkxaso ye-503 yeedola.
I-Binance Coin (i-BNBUSD) Ixabiso liqhekeza kwiNqanaba le-$ 540, iNqanaba leNkxaso yoVavanyo kwi-503 yeedola.
Uhlalutyo lwamaxabiso e-BNBUSD-Disemba 17
Ixabiso linganciphisa kwi-$ 430 kunye ne-$ 364 amanqanaba okuxhasa anikezela ngenqanaba lenkxaso kwi-$ 503 ayibambeli. Kwimeko esele ikhankanyiwe inqanaba, ixabiso le-BNB linokwenyuka ukuya kumanqanaba okumelana ne-540 yeedola, i-599 yeedola kunye ne-678 yeedola.
Imarike ye-BNB ilandela ingxelo yokugqibela yokuxela kwangaphambili; ipateni yetshathi ephindwe kabini eyenziwe kwitshathi yemihla ngemihla, abahwebi kufuneka balindele ukuwa okukhulu. Ekuqaleni, kwakukho ukuqhambuka kwenkohliso kwinqanaba lokumelana ne-$ 678 kwi-01 kaDisemba; kwasekwa ikhandlela lemihla ngemihla elinemilenze emide ye-Doji. Abathengisi batshintsha imarike kwaye kwakukho ukuwa okukhulu kunye nokwakhiwa kwekhandlela elinamandla kunye nelikhulu. Ixabiso lihla ukuya kwinqanaba eliphantsi le-$ 503 lenkxaso.
Itshati yemihla ngemihla ye-BNBUSD, nge-17 kaDisemba
I-crypto ibonakala ibuyisela umva njengoko ikhandlela le-bullish lenza kwinqanaba lenkxaso ye-503 yeedola. Ixabiso lirhweba ngaphantsi kwe-Moving Average 9 kunye ne-21 kumgama ukubonisa amandla e-bearish anamandla. Ixabiso linganciphisa kwi-$ 430 kunye ne-$ 364 amanqanaba okuxhasa anikezela ngenqanaba lenkxaso kwi-$ 503 ayibambeli. Kwimeko esele ikhankanyiwe inqanaba, ixabiso le-BNB linokwenyuka ukuya kumanqanaba okumelana ne-540 yeedola, i-599 yeedola kunye ne-678 yeedola.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-BNBUSD yayiqala kwinqanaba lokumelana ne- $ 599 kunye nenqanaba lokuxhasa kwi- $ 540 ngaphambi kokuba kuqhume inkohliso kwinqanaba le- $ 599. Ukuqhawuka kuphazanyiswe ngabathengisi kwaye oku kuzise ukubuyela umva kwexabiso ngokukhawuleza. Ixabiso liyanciphisa ukuya kwinyanga ephelileyo kwaye okwangoku kwinqanaba lokuxhasa kwi- $ 503.
Itshathi ye-BNBUSD yeeyure ezi-4, ngoDisemba 17
I-Relative Strength Index ixesha le-14 likwinqanaba le-50 kunye nomgca wesignali okhomba phezulu obonisa ukuba ixabiso linokuthi lihlehlise kwinqanaba lenkxaso ye-$ 503 kwaye iinkunzi zeenkomo zingathatha imarike.
Binance Repositions to Curry Favour from UK Regulatory Authoritys Emva kokuVanlwa
Ukuhlaziywa: 6 Disemba 2021
I-CEO ye-Binance u-Changpeng Zhao (CZ) ubonise ukuba utshintshiselwano olukhulu lwe-cryptocurrency lwehlabathi luzama ukuphinda luvuselele icandelo layo lase-UK, emva kokunciphisa imisebenzi yayo yi-Financial Conduct Authority (FCA) ngoJuni 2021.
NjengoBinance.US, icandelo likaBinance laseLondon iBinance Markets Limited ejolise ekubeni liqumrhu elizimeleyo elisebenzela imarike yase-UK. Ngelishwa, i-FCA yema endleleni yeli bhongo, ilandela i-clampdown. Nangona kunjalo, abathengi base-UK baye bafumana indlela yokufikelela kwiinkonzo nge-domain ye-Binance.com, nangona ukuvalwa okukhoyo ekutshintshisweni ngenxa yokuchithwa kokulawula.
I-CZ isandula ukuqaphela ukuba ubudlelwane benkampani kunye ne-FCA buphucuke kakhulu ukusukela ngoko kwaye bakwingxoxo. I-CEO ibonise ukuba inkampani iqeshe amagosa amaninzi okuthotyelwa (kubandakanywa nabasebenzi bangaphambili be-FCA) ukuyinceda ukuba ithandeke emehlweni e-FCA kunye nokukhusela ilayisensi.
Omnye wemiba esisiseko i-watchdog yase-UK eyayinayo nenkampani yayilinqanaba lokungafihli malunga nendawo yayo yokuhlala kunye nesakhiwo seshishini. Ngoku, uBinance sele eqalisile ukumisa iiofisi kwihlabathi liphela-kubandakanywa nenye e-UK-kwaye useka amaqumrhu asemthethweni. Utshintshiselwano lwe-crypto lukholelwa ukuba kufuneka lusebenze e-UK phakathi kweenyanga ezintandathu ezizayo ukuya kunyaka, kugxininise ekuchaseni imali kunye nokuthotyelwa kwenkxaso-mali yokulwa nobunqolobi. Inkampani ikwanethemba lokubonelela ngekamva kunye nentengiso ephuma e-UK.
Amanqanaba angundoqo eNkozo yeBinance ekufuneka ibukele — nge-6 kaDisemba
Emva kokugcina ukunyuka okuzinzileyo ecaleni kwendlela enyukayo yeeveki ezilishumi, I-Binance Coin (BNB) yafumana ikhefu layo lokuqala elizinzileyo ngezantsi kwalo mgca nge-4 kaDisemba phakathi kwengozi yentengiso. Oko kwathiwa, i-BNB ibonakala iphinde yafumana uzinzo kwinkxaso ye-$ 540 njengoko i-bearish momentum iphinde yaqala ngoMvulo.
I-BNBUSD - Itshathi yeeyure ezi-4 kwi-BinanceUS. Umthombo: TradingView
Kunye noninzi lwemalike ye-crypto, i-cryptocurrency yesithathu ngobukhulu inokubandezeleka ngokuqhubekeka kwe-bearish ukuya kwi-flash crash ephantsi kwi-495 yeedola kwiintsuku ezizayo. Nangona kunjalo, oku kuthambekela kuya kusebenza ngokungasebenziyo nje ukuba ixabiso libuyele ngaphezulu kwe-trendline kwakhona, i-10% ye-bullish move.
Okwangoku, amanqanaba am okumelana ne-$ 560, i-$ 580, kunye ne-$ 600, kwaye amanqanaba am enkxaso yi-$ 540, i-$ 520 kunye ne-$ 500.
Imali yokutshintsha imali kwiBhinance: $ 92.4 billion
Imali yokutshintsha Binance? 4.15%
tags IChinance Coin, BNB, Cryptocurrency, Uhlalutyo lobuchwephesha
I-Binance iKhubaza ngokufutshane kwaye iqalise kwakhona ukurhoxa phakathi kokuBuyisa kwakhona kwe-BNB ye-Bullish
Ukuhlaziywa: 1 Novemba 2021
Kwangoko namhlanje, i-behemoth crypto exchange I-Binance (BNB) ukurhoxiswa kwe-cryptocurrency ekhubazekileyo kwiqonga layo, ikhankanya ukusilela okukhulu njengesizathu sokurhoxiswa kokurhoxiswa.
Utshintshiselwano kamva lwabhengeza ukuba ulubuyisele kwakhona uphawu lwalo lokurhoxisa, lwaphinda lwayimisa kwakhona ngaphambi kokuba luyivule. U-Binance ubhengeze nge-Twitter malunga nemini (GMT) ukuba:
"Siye sacima okwethutyana yonke imali yokurhoxiswa kwe-crypto kwi-Binance.com ngenxa yokusilela okukhulu.
Qiniseka, iqela lethu lisebenza kuyo ngokubaluleka okuphezulu. Enkosi ngomonde wenu kwaye nicela uxolo ngayo nayiphi na ingxaki eniyenzileyo.”
Ngexesha elithile kamva, utshintshiselwano olukhulu lwathumela kwi-tweeter ukuba ukuhoxiswa kwe-crypto kuqale kwakhona kodwa yatsala iplagi kwakhona kwimizuzu elandelayo. Ngentsimbi ye-2 pm (GMT), utshintshiselwano lwe-crypto luphinde lwaphinda lwaqala ukurhoxiswa kwaye lwacela uxolo kubasebenzisi ngenxa yokuphazamiseka.
U-Binance wenze iindaba ngezizathu ezininzi ezingalunganga kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, kunye nesiganeko sanamhlanje songeza kuphela kuyo.
NgoJuni, utshintshiselwano lwe-crypto luye lwamisa ukuhoxiswa kwi-sterling kubathengi base-UK emva kwezilumkiso ezivela kwiGunya lokuPhatha kweMali ekusebenziseni iinkonzo ze-Binance Markets Limited, i-subsidiary ye-Binance.
Ngelo xesha, iqonga laliphakathi kwe 59 ukutshintshiselana ukushiya eMzantsi Korea emva kokuba urhulumente eqalise imithetho engqongqo kwishishini le-crypto ngoSeptemba.
Utshintshiselwano lwe-cryptocurrency luye lwaba phantsi koxinzelelo lokujonga imvelaphi yomthengi engasebenziyo, ekutyholwa ukuba ivumele abadlali ababi ukuba bakhuphe imali ngeqonga. Nangona kunjalo, utshintshiselwano oluphezulu lwe-crypto luye lwaqinisekisa ukuba i-know-your-customer (KYC) ihlola ngokufanelekileyo ukujongana nolwaphulo-mthetho lwezemali okanye i-graft.
Amanqanaba angundoqo eNkozo yeBinance ekufuneka ibukele — nge-1 kaNovemba
Phakathi kweseshoni yokurhweba ezolileyo ngoMvulo, i-BNB irekhode i-5% ye-intraday rally kwaye yachukumisa indawo yayo ephezulu ukususela ngoMeyi 17 kwi-$ 543. Oku kutsiba kuza phakathi kweentsuku ezintathu zokudityaniswa phakathi kwe-540 yeedola kunye nenqanaba le-510 yeedola kwimpelaveki ephelileyo.
I-BNBUSD-Itshathi yeeyure ezi-4
Oko kwathiwa, i-cryptocurrency yesithathu ngobukhulu ngoku irhweba ngaphakathi kwetshaneli enyukayo, ebonisa ukuba ukunyuka okungaphezulu kunokwenzeka kwixesha elisondeleyo. Ukuhlaziya kwakhona kunye nekhefu ngaphezu kwenqanaba le-$ 540 (elandela ukulungiswa okuncinci kwamva nje ukuya kwi-$ 535) kunokudibanisa i-bullish bias kwaye iqhube ixabiso kwi-$ 580 kwiintsuku ezizayo.
Ngakolunye uhlangothi, sinokubona ukuwa kwakhona kwi-$ 540 - i-$ 510 uluhlu lokudibanisa ukuba iinkunzi zenkomo zisilela ukuphinda zithathe umgca we-$ 540.
Okwangoku, amanqanaba am okumelana ne-$ 540, i-$ 560, kunye ne-$ 580, kwaye amanqanaba am enkxaso yi-$ 520, i-$ 500 kunye ne-$ 488.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.62 zezigidi
Imali yokutshintsha imali kwiBhinance: $ 89.4 billion
Imali yokutshintsha Binance? 3.42%
tags IChinance Coin, BNB, Cryptocurrency, iindaba, I-Techniocalanalysis